नेपाली पब्लिक शुक्रबार, असार १२, २०७७
काठमाडाैं– सरकारले पहिलोपटक झाडापखाला रोक्नका लागि खोप दिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जन्मदेखि पाँच वर्षमुनिका बच्चालाई झाडापखालाविरद्ध खोप ‘रोटारिक्स’ दिने भएको हो ।
महाशाखाका बालस्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले झाडापखालाबाट वर्षेनि बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न उक्त खोप दिन थालिएको बताए । उनका अनुसार वर्षेनि तीन लाख ५० हजारदेखि चार लाख बालबालिकालाई झाडापखाला लाग्ने र तीमध्ये नौ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
बालबालिकामा पखाला लाग्ने ४० प्रतिशत रोटा भाइरसका कारणले हुने भएकाले उक्त खोप दिन थालिएको हो । ६० प्रतिशत अन्य भाइरस, परजीवी, जीवाणुजस्ता कारणले हुने गर्दछ । उनका अनुसार ‘रोटारिक्स’ यही असारभित्र शुरु गर्नका लागि सातवटै प्रदेश हुँदै सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ । उक्त खोप सरकारका १६ हजार खोप केन्द्रबाट नियमित स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बालबालिकालाई खुवाइने छन् ।
बालबालिकालाई उक्त खोप पहिलोपटक छ हप्तामा र दोस्रो पटक १० हप्तामा खोप खुवाइने गरिन्छ । खोपको मात्रा १.५ मिलिलिटर हुन्छ । “एक बालबालिकालाई वर्षको दुईदेखि तीन पटक पखाला लाग्ने गरेको छ”, उनले भने, “पखालले गर्दा बच्चाको शरीरमा भएको पानी सकिन्छ (जलवियोजन) जसले गर्दा बच्चाको मृत्यु नै हुन्छ । त्यसैले पखाला रोक्न खोप दिइन थालेको हो ।”
अब नयाँ जन्मने बच्चा र छ महिना पुगेका बच्चाबाट उक्त खोपको शुरुआत गरिने शाखाका प्रमुख डा गौतमले बताए । नेपालमा बाल मृत्युदर कम गर्न जन्मेदेखि एक वर्ष तीन महिनासम्मका बालबालिकालाई १२ प्रकारका खोप निःशुल्क दिइने गरिन्छ । रासस
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १२, २०७७
बिहीबार, साउन २२, २०७७ १४:५५ मजदुरको ज्याला एक सय बढ्याे
बिहीबार, साउन २२, २०७७ ०९:०२ जुम्लाको स्वास्थ्य चौकी सिल
बिहीबार, साउन २२, २०७७ ०८:०६ उपत्यकाका १६ जना कोरोना संक्रमित सम्पर्क बाहिर, ३५ जना संक्रमित पनि घरमै
बुधबार, साउन २१, २०७७ ००:५८ विपश्यना ध्यान किन ?
सोमबार, साउन १९, २०७७ ०१:२८ कोरोनाबाट बच्न उपयोगी क्वाँटी
आइतबार, साउन १८, २०७७ ११:२८ अब झाडापखला लाग्नेले पनि कोरोना जाँच्न पर्ने
एयर इन्डियाको जहाज दुई टुक्रा ! कसरी भयो दुर्घटना ?
क्रिकेटर सन्दीपको आयो कोरोना रिपोर्ट
प्रधानमन्त्रीको कोरोना रिपाेर्ट आयो
हात्तीको दाह्रा किनबेच गर्दा गर्दै पक्राउ
कक्षा ११ को परीक्षा नगर्न निर्देशन
कोरोनाले खोस्यो राखीको रौनक नेपाली पब्लिक
प्रकाश सपुतको बदला
बन्ने भयो नेपाली कविताको प्रादेशिक इतिहास
अब चार हजारमा कोरोना परीक्षण
विविधतायुक्त धर्म संस्कृतिले एकता कायम गर्छ – मुख्यमन्त्री गुरुङ